PeerTube ihe nlere na ntanetị nke vidiyo | Site na Linux
PeerTube bụ a free na decentralized n'elu ikpo okwu na-eji na-ahazi video mba na vidiyo gụgharia.
PeerTube awade ihe ozo na YouTube, Dailymotion na Vimeo, nọọrọ onwe ha na ndị ọ bụla na-eweta, nke na-eji P2P dabere na nkesa ọdịnaya iji jikọta okporo ụzọ ma jikọta ihe nchọgharị ndị ọbịa na ibe ha.
Amalitere na 2015 site na onye mmemme a maara dị ka Chocobozzz, mmepe nke PeerTube bụ nke ndị na-abụghị ndị ọrụ French na-akwado Framasoft. Ebumnuche bụ inye ihe ọzọ na nyiwe nke etiti dị ka YouTube, Vimeo ma ọ bụ Dailymotion.
Ihe mmepe nke oru ngo a na-ekesa n’okpuru ikikere AGPLv3.
PeerTube dabere na ojiji nke WebTorrent Client (BitTorrent) na-agba ọsọ na ihe nchọgharị na iji teknụzụ WebRTC iji mepụta ọwa nkwukọrịta P2P kwụ ọtọ n'etiti ihe nchọgharị ahụ na protocol ActivityPub.
Site n'ime nke a PeerTube lma ọ bụ nke na-enye ohere bụ isonyere disparate sava na video na izugbe federated netwọk nke ndị ọbịa na-etinye aka na nnyefe nke ọdịnaya ma si otú nwere ohere ịdenye aha na ọwa ma nata ọkwa banyere vidiyo ọhụrụ.
Ihe nkesa ọ bụla na vidiyo na-arụ ọrụ nke BitTorrent tracker nke na-akwado ndị ọrụ akaụntụ nke sava a na vidiyo ya. Emebere ID onye ọrụ n'ụdị "@ user_name @ server_domain".
Pezọ PeerTube si arụ ọrụ bụ ihe pụrụ iche na nke ahụ nnyefe data n'oge nlele na-eme kpọmkwem site na ihe nchọgharị nke ndị ọbịa ndị ọzọ na-elele ọdịnaya.
Ọ bụrụ na ọnweghị onye na-ekiri vidiyo, sava na-ahazi ihe nkesa ahụ ka ebuputara vidiyo ahụ na mbụ (ejiri WebSeed protocol).
PeerTube na-eji usoro ActivityPub eme ihe, ọkọlọtọ weebụ W3C ọhụrụ, iji mee ka njikwa na ndakọrịta na ọrụ ndị ọzọ dịka Hubzilla, Mastodon ma ọ bụ Diaspora.
Ihe enwere ike ime ka ọ pụta ìhè banyere ikpo okwu a bụ vidiyo vidiyo, n'ihi na o zuru ezu iji bulite vidiyo, nkọwa na usoro mkpado na otu n'ime sava ahụ na vidiyo a ga-adị na ntanetị.
Ma ọ bụghị naanị site na isi ihe nkesa na-ebudata. Iji lee vidiyo site na iji nkwukọrịta P2P, wijetị pụrụ iche nwere ihe ọkpụkpọ weebụ arụnyere nwere ike ịgbakwunye na saịtị ahụ.
Iji rụọ ọrụ na PeerTube ma sonye na nkesa ọdịnaya, ihe nchọgharị oge niile zuru ezu ma ọ nweghị sọftụwia ọzọ achọrọ.
Enwere ike soro ọrụ na họrọ video ọwa.
Onye ọrụ nwere ike ịdenye aha na egwu PeerTube nke nwere mmasị na, n'otu oge ahụ, ghara ijikọta ndenye aha na akaụntụ etiti, maka nlele nke mgbanwe na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta (dịka ọmụmaatụ, na Mastodon na Pleroma) ma ọ bụ site na RSS.
O kwere omume nwee ike ịnye ihu igwe iji hazie nhazi ọwa ma jikwaa ọrụ ndị dịnụ (Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwe ọdịdị nke ibe ma ọ bụ gbochie ngosipụta nke ndepụta nke vidiyo ndị edepụtara na mbụ, mana ịnwere ike ịdenye aha iji soro ngosi nke vidiyo ọhụrụ).
Na mgbakwunye na kesaa okporo ụzọ n'etiti ndị ọrụ na-ekiri vidio, PeerTube na-enyekwa ohere ndị mepụtara maka ndị isi maka nkesa vidiyo ka ha chekwaa vidiyo ndị ọzọ, na -emepụta netwọk ekesara nke ọ bụghị naanị ndị ahịa, kamakwa sava, yana inye ntachi obi.
Iguzogide mgbochi. E guzobere netwọk PeerTube dị ka obodo nke obere sava nnabata vidiyo jikọtara ọnụ, nke ọ bụla nwere onye nchịkwa ya yana iwu nke ya nwere ike ịnabata.
Ọ bụrụ na onye ọrụ enweghị afọ ojuju na iwu nke otu sava, ọ nwere ike jikọọ na sava ọzọ ma ọ bụ malite sava nke ya, nke nweere onwe ya ịtọ ọnọdụ ọ bụla. Ugbu a gburugburu sava 250, site na nkwado nke ndị ọrụ afọ ofufo na òtù dị iche iche, na-agba ọsọ ịnabata ọdịnaya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » PeerTube ihe omuma di omimi nke vidio
Ndo, mana enyela isi m nke ukwuu…. ọ bụrụ na aghọtaghị m, ọ bụrụ na m guzobe ihe nkesa Peertube, m ga-anabatakwa vidiyo ndị na-abụghị nke m? M na-arịọ nke a karịa ihe ọ bụla maka nsogbu esemokwu, n'ezie, ọ bụghị otu inwe nche nke oghere nchekwa m karịa ka ị gbakọọ ihe ọzọ a na-atụghị anya ya maka vidiyo m na-anaghị ebugo.
Eduard Vidal Tulsa dijo
lee, ha gwara gị mba
Zaghachi Eduard Vidal Tulsà
Ọfọn, m na-eche otú ahụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ…. Ihe nkesa gi na akwado, na akwado ma mebe iwu gi. Nwere ike imeghe ya ọhaneze ma ọ bụ mechie ya maka onwe gị. Also na-ekpebi ọnụọgụ netwọk ole ị debanyere aha maka gọọmentị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị mepee ya n'ihu ọha, setịpụrụ njedebe nke megabytes x vidiyo, vidiyo vidiyo kwa izu ma ọ bụ ọnwa, isiokwu nke ọwa (na-enweghị NFSW ọdịnaya, dịka ọmụmaatụ)…. Enweghị mmachi dị ka iwu, mana sava ọ bụla nwere iwu nke ya n'ime isi ihe ole na ole
odo odo dijo
Na gịnị ka a pụrụ ịchọta na Peertube?
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enwere m mmasị na vidiyo ndị na-enyocha mbara igwe, olee otu m si achọ ha?
Nwere ike tinye vidiyo maka naanị mmadụ ole na ole ị ga-ahụ?
Ebee ka onye nkịtị si mụta ihe enwere ike ime ya na Peertube na otu esi eme ya?
MidnightBSD ihe ntanye FreeBSD bara uru ịnwale